Agencies |August 19, 2014, 10:08 PM IST
Ryan McLaren and Wayne Parnell claimed three wickets apiece as South Africa beat Zimbabwe by 61 runs in the second one-day international to clinch the three-match series on Tuesday in Bulawayo.
McLaren claimed figures of 3 for 21 in eight overs while Parnell took 3 for 28 in nine as Zimbabwe were bowled out for 196 in response to South Africa?s 257. Quinton de Kock made 38 to equal the mark of England's Jonathan Trott in reaching the landmark of 1,000 runs in only 21 one-day games.
Faf du Plessis top-scored with 55 as South Africa were bowled out for 257 in 49.4 overs after being put in to bat. It was only the third time in 34 ODI meetings that Zimbabwe had bowled out their southern African rivals.
Sean Williams (55) then passed 50 for the second successive match but Zimbabwe were bowled out for 196 in 49.1 overs. Paceman Wayne Parnell took three for 28 while all-rounder Ryan McLaren picked up three for 21.
cricketRyan McLarenSouth AfricaWayne ParnellZimbabwezimbabwe vs south africa 2014